Abakhiqizi bezombala be-Photoluminescent - Abathengisi be-pigolineines e-China & Factory
I-Photoluminescent Pigment esheshayo ejabulile
Umbala wethu wesikhathi eside emva kokukhanya kwesithombe-luminescent ungakhipha ukukhanya ngokufaka amalambu ahlukahlukene abonakalayo futhi angasetshenziswa kaninginingi. Imikhiqizo ayiqukethe noma yiziphi izinto ezifaka imisebe futhi ingasatshalaliswa ngokulinganayo njengesengezo phakathi kwama-ejenti asobala njengokuhlanganiswa, inki, upende, amapulasitiki, okusanhlamvu, ingilazi, i-fiber ukwenza imisebenzi yokuphuma yama-ejenti.
Umbala walolo hlobo uthatha umbala wayo wemvelo ezindaweni ezikhanyayo futhi ukhipha imibala ehlukene yamalambu ebumnyameni. Ingasetshenziselwa ukukhanyisa okuqubukayo, amamaki okubonisa kanye nokugqumisa.
Uchungechunge olujabulisayo olujabulisayo olujwayelekile lwe-luminescent
Isasasa elilula, inani eliphakeme lomsakazo we-super super emva kwe-glow strontium ebonakalayo esetshenzisiwe ye-luminescent pigment njengokulandela umbala Okhanyayo: Uchungechunge oMphuzi oluhlaza okotshani okucacisiwe Izinhlobo / ikhodi Ukukhanyisa （mcd / m2） Isikhathi se-Afterglow Min Minicic size (ku-D D50) Ubukhulu bezinhlayiya ububanzi 1 Min 10 Min 60 Min Dmax (um) <RBG-60DJ101S 'RBG-601DJ101S 4000 650 65 8000 75 ~ 85 120 RBG-602DJ102S 3300 450 ...
Kukhanya Okungamanzi Emandleni Amnyama Ukuze Ubengezele Ngokukhanya Ebumnyameni
Ukukhanya okuphezulu nobudeNgaphezulu kweminyaka eyishumi yokuphilaNon-enobuthi futhi ayinabungoziKuhlaza-okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, i-trailer yesibhakabhaka esibhakabhaka njll. Kutholakala
I-Photoluminescent Powder Yokukhipha Amanzi Okusebusweni Paint
Lokhu kukhanya okungasenamanzi ku-powder emnyama kuyacasulwa ukusetshenziswa kwamanzi ngopende okusetshenziswa amanzi, banosayizi oyinhlayiya ofanelekile wokwenza upende nokungahambisani namanzi kakhulu, banezici ezilandelayo: Inqubo engenamanzi yiphi ipende esekwe, ukumelana kwamanzi okuzinzile.
I-Strontium (Sr) Aluminium Photoluminescent Pigment
Imikhiqizo ayiqukethe noma yiziphi izinto ezifaka imisebe futhi ingasatshalaliswa ngokulinganayo njengesengezo phakathi kwama-ejenti asobala njengokuhlanganiswa, inki, upende, amapulasitiki, okusanhlamvu, ingilazi, i-fiber ukwenza imisebenzi yokuphuma yama-ejenti.